Football Khabar » ‘बार्सिलोनामा सुपर फ्लप’ कोउटिन्होको ब्राजिलमा ‘शानदार’ सुरुआत !
‘बार्सिलोनामा सुपर फ्लप’ कोउटिन्होको ब्राजिलमा ‘शानदार’ सुरुआत !
अघिल्लो जनवरी सिजनमा इंग्लिस क्लब लिभरपुलबाट महँगो मूल्य १४५ मिलियन पाउन्डमा स्पेनिस बार्सिलोना पुगेका ब्राजिलियन स्टार फिलिपे कोउटिन्होका लागि सिजन २०१८/१९ समग्रमा ‘खराब’ रह्यो । सिजनको सुरुबाटै आलोचना खेप्न थालेका उनले सिजन सकिँदासम्म उस्तै दिनको सामना गरे ।
अझै बार्सिलोना युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट भएपछि त उनको आलोचना अझै बढी भयो । जसका कारण उनलाई बार्सिलोनाले यसै समरमा बेच्ने सूचीमा राखेको चर्चा सरुवा बजारमा छ ।
भर्खरै सकिएको सिजन कोउटिन्होले घरेलु लिग ला लिगामा ३४ खेल खेल्दा मात्रै ५ गोल गरे भने २ गोलका लागि असिस्ट गर । त्यस्तै, च्याम्पियन्स लिगमा १२ खेल खेल्दै ३ गोल गरे । कोपा डेल रे फुटबलमा ७ खेल खेल्दै ३ गोल गरे । यसरी हेर्दा उनले सो सिजन कूल ५३ खेल खेल्दा ११ गोल गर्दै सिजनभरमा मात्रै २ गोलका लागि असिस्ट गरे ।
त्यसअघि सिजन २०१७÷१८ मा लिभरपुलमा आधा सिजन मात्रै खेलेका उनले मात्रै २० खेल खेल्दै १२ गोल गरेर ११ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए, जुन बार्सिलोनामा बिताएको सिंगै सिजनको रेकर्डभन्दा पनि दोब्बरले बढी हो । उनको यही प्रदर्शनबाट लोभिएर बार्सिलानाले उनलाई लामो रस्साकस्सीपछि महँगो मूल्यमा अनुबन्ध गरेको थिए ।
बार्सिलोनामा खास गरी प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले कोउटिन्होलाई फरक–फरक पोजिसनबाट खेलाएकाले उनले लयमा प्रदर्शन गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
कोपामा समाते लय !
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता कोपा अमेरिकामा ब्राजिलले शनिबार बिहान आफ्नो र प्रतियोगिताकै पहिलो खेलमा बोलिभियालाई ३–० ले हरायो । आफ्नो घरमा ब्राजिललाई जिताउन कोउटिन्होले खेलको ५०औं र ५३औं मिनेटमा गरी ३ मिनेटको बीचमा २ गोल गरे ।
उनले पहिलो गोल पेनाल्टीबाट गरेका थिए भने दोस्रो गोल हेडिङबाट गरेका थिए । राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो खेलमै लयमा प्रदर्शन गरेका उनले आफ्नो असली लय समातेका छन् ।
बोलिभियाविरुद्ध कोउटिन्होको प्रदर्शनलाई धेरैले ‘कमब्याक’ भनेका छन् । त्यसै पनि राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख फरवार्ड नेइमार घाइते भएर टोलीबाहिर रहेपछि प्रशिक्षक टिटेले कोउटिन्होलाई नै प्रमुख खेलाडीको जिम्मेवारी दिएका छन् । फ्रि किक र पेनाल्टी हान्ने अधिकारसमेत पाएका उनले यस प्रतियोगितामा नेइमारको काम गर्ने दायित्व छ । भलै, टिटेले नेइमारको स्थानमा भने चेल्सीबाट खेल्ने विलियनलाई टोलीमा डाकेका छन् ।
बोलिभियाविरुद्ध कोउटिन्होले समग्रमा उच्च प्रदर्शन गरे । उनले हरेक तवरले प्रदर्शन पूरा गर्दै टिमलाई जिताउन २ गोलसमेत गरे । खेलपछि प्रशिक्षक टिटेले कोउटिन्होको तारिफ गर्दै भने, ‘उनको स्टाइल यही हो, जुन मलाई मन पर्छ ।’
पहिलो खेलमा कोउटिन्होले जुन स्तरको प्रदर्शन गरे, त्यसबाट उनले कोपामा उच्च प्रदर्शन गर्ने संकेत दिएका छन् । पहिलो खेलमै टोलीको जितमा प्रमुख योगदान दिएका उनको मनाबेल उच्च रहेको टिटेले पनि बताएका छन् ।
फ्यानहरूले भने कोउटिन्होले बार्सिलोनामा बिताएको खराब समयको क्षतिपूर्ति राष्ट्रिय टिमबाट असुल्ने भन्दै सामाजिक सन्जालहरूमा तारिफ गरिरहेका छन् ।
कोउटिन्हो उनै खेलाडी हुन्, जसले ब्राजिलका पछिल्ला तीन ठूला अफिसियल प्रतियोगितामा टिमका लागि ओपनिङ गोल गरेका छन् । उनले सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको कोपा अमेरिका, सन् २०१८ मा भएको विश्वकपमा समेत टोलीका लागि ओपनिङ गोल गरेका थिए ।
यसपटक कोपामा ब्राजिललाई उपाधिका लागि सबैभन्दा प्रमुख दाबेदार टिम मानिएको छ । धेरैले नेइमारबिना पनि ब्राजिलले उपाधि जित्न बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०४:५४